Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Ndị kọrịnt 13:1-13
Ịhụnanya kacha ihe ndị ọzọ niile mma (1-13)
13 Ọ bụrụ na m na-asụ asụsụ dị iche iche ụmụ mmadụ na-asụ nakwa nke ndị mmụọ ozi na-asụ, ma ahụghị m ndị ọzọ n’anya, adị m ka ogele na-adachisị ndị mmadụ ntị ma ọ bụ ájà na-eme mkpọtụ. 2 Ọ bụrụkwa na m nwere ike ibu amụma, mara ihe nzuzo niile dị nsọ, e nyekwa m ike ịma ihe niile,+ mụ enweekwa okwukwe siri ezigbo ike nke na m nwere ike ibupụ ugwu, ma ahụghị m ndị ọzọ n’anya, o nweghị ihe m bụ.*+ 3 Ọ bụrụ na m na-enye ihe niile m nwere ka e jiri ha zụọ ndị ọzọ,+ ọ bụrụkwa na mụ ejiri ndụ m chụọ àjà, ka m wee na-anya isi, ma ahụghị m ndị ọzọ n’anya,+ o nweghị uru ọ bụla m ritere. 4 Ịhụnanya+ na-enwe ndidi,*+ dịrịkwa obiọma.+ Ọ naghị ekwo ekworo.+ Ọ naghị etu ọnụ, ọ naghịkwa ebuli onwe ya elu.+ 5 Ọ naghị akpa àgwà na-ekwesịghị ekwesị.*+ Ọ naghị achọ ihe ga-abara naanị ya uru.+ A naghị akpasu ya iwe ngwa ngwa.+ Ọ naghị agụkọ ihe ọjọọ e mere ya.+ 6 Ọ naghị aṅụrị ọṅụ n’ihe ọjọọ,+ kama ọ na-eso eziokwu aṅụrị ọṅụ. 7 Ọ na-edi ihe niile,+ na-ekwere ihe niile,+ na-enwe olileanya ihe niile,+ na-atachi obi n’ihe niile.+ 8 Ịhụnanya anaghị akwụsị akwụsị.* Ma, ike Chineke na-enye ndị mmadụ ibu amụma, na ịsụ asụsụ dị iche iche,* na ịmata ihe, ga-emecha ghara ịdị. 9 N’ihi na ihe anyị ma ezughị ezu,+ amụma anyị na-ebukwa ezughị ezu. 10 Ma, mgbe ihe anyị ma zuru ezu, amụma anyị na-ebu ezuokwa, ndị nke ahụ na-ezughị ezu agaghịzi adị. 11 Mgbe m bụ nwatakịrị, m na-ekwu okwu ka nwatakịrị, na-eche echiche ka nwatakịrị, na-elekwa ihe anya ka nwatakịrị. Ma ugbu a m bụzi dimkpa, anaghịzi m eme ka nwatakịrị. 12 Ka ọ dị ugbu a, ihe anyị ji ahụ ihe bụ enyo na-ahụ ihe inyoghi inyoghi. Ma mgbe ahụ, anyị ga na-ahụ ihe ihu na ihu. Ugbu a, ihe m ma gbasara Chineke ezughị ezu. Ma mgbe ahụ, m ga-ama ihe gbasara ya nke ọma, otú yanwa sikwa mara m nke ọma. 13 Ma, ihe atọ ndị a ga-afọdụ: okwukwe, olileanya, na ịhụnanya. Ma nke kacha ha niile bụ ịhụnanya.+
^ Ma ọ bụ “abaghị m uru ọ bụla.”
^ Ma ọ bụ “Ọ naghị akparị mmadụ.”
^ Ma ọ bụ “ada ada.”
^ Ya bụ, mmụọ nsọ ime ka mmadụ nwee ike ịna-asụ asụsụ dị iche iche.